कैलालीमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारको गाडी जलाइयो, कांग्रेस कार्यकर्ताहरुमाथि शंका !
ARCHIVE, POLITICS » कैलालीमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारको गाडी जलाइयो, कांग्रेस कार्यकर्ताहरुमाथि शंका !
कैलाली - कैलालीमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारको गाडी जलाइएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार कैलाली–२ ‘क’ का प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार रतन थापाको निजी जीपमा आगजनी भएको हो । आगजनी कसले गरेको हो भन्ने यकिन भएको छैन ।
वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार थापाको लम्की चुहा नगरपालिका स्थित घरपछाडि राखिएको बा१६च ६८९९ नम्बरको जीप जलेर धोस्त भएको बताइएको छ । घटना नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले गरेको स्थानीय बाम गठबन्धनका नेताहरुको आशंका छ ।